म्याक्रोइकोनॉमिक्स | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
"स्रोत" को अवधारणा "उत्पादनका कारक" को अवधारणा भन्दा कसरी फरक छ?
"स्रोत" को अवधारणा "उत्पादनका कारक" को अवधारणा भन्दा कसरी फरक छ? सबैभन्दा सामान्य अर्थमा, संसाधनहरू (फ्रान्सेली स्रोतबाट - सहायक साधन) भनेको पैसा, मान, भण्डार, अवसर, कोषको स्रोत, आय हो। सामान्यतया तिनीहरूले हाइलाइट ...
छोटो के हो?
संक्षिप्त के हो? यो सबै सरल छ। संक्षिप्त (अ brief्ग्रेजी संक्षिप्तबाट) विज्ञापनदाता र विज्ञापनदाता बीचको मिलाप आदेशको छोटो लिखित रूप हो, जसमा भविष्यका विज्ञापन अभियानको मुख्य प्यारामिटरहरू तोकिन्छन्। संक्षिप्त पत्र (जर्मन) केहि यस्तो ...
अन्तिम 20 वर्षमा डलरको फ्याटफिट कति भयो? तपाईं प्रतिशतमा लेख्न सक्नुहुन्छ वा फरक तरिकाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ।
विगत २० बर्षमा डलरले कति फुलाएको छ? तपाईं प्रतिशतमा लेख्न वा फरक तरिकाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। मुद्रास्फीति अवमूल्यनको तुलनामा केहि पनि छैन। बुझ्नुहोस् अवमूल्यन "ग्रीनब्याक" को खरीद शक्तिमा कमी हो ...
मिश्रित अर्थव्यवस्थाको मुख्य विशेषताहरु। यसको फायदा र हानि ??
मिश्रित अर्थव्यवस्थाको मुख्य विशेषताहरू। यसका फाइदाहरू र नोक्सानहरू ??? पहिलो प्लस: मिश्रित अर्थतन्त्रको मुख्य प्लस तीन प्रकारको आर्थिक प्रणालीहरूको संयोजन हो (परम्परागत, केन्द्रीकृत, बजार) दोस्रो प्लस: यस्तो निजी सम्पत्ति ...
मोनेटाइजेशन के हो?
मुद्रीकरण भनेको के हो? त्यहाँ कुनै शब्द छैन। त्यहाँ "मोनेटाइजेशन" छ। पैसाको साथ लाभ मा प्रतिस्थापन। लाभहरू पैसाले प्रतिस्थापन गरिन्छ शब्द मोनेटाइजेशन पहिले नै हिज्जे शब्दकोशमा रेकर्ड गरिएको छ। मैले साइट http://www.newslab.ru/blog/153095 मा यो विवरण फेला पारे: र कसरी ...
मलाई एउटा समस्या छ। म बुझ्न के सिक्न सक्दिन? कृपया, यदि तपाईं उदाहरणहरूसँग गर्न सक्नुहुन्छ।
मलाई समस्या छ। बुझ्न सक्दिन कि परिशोधन के हो? कृपया, यदि तपाईं उदाहरण संग गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म मैले बुझें, मूल्यह्रास उत्पादनमा त्यस्तो व्यय वस्तु हो, आयको निश्चित प्रतिशत, ...
अर्थव्यवस्था। कृपया कृपया अग्रिम धन्यवादमा आपूर्ति र मागको गैर-मूल्य कारक उदाहरणहरूको उदाहरण दिनुहोस्
अर्थव्यवस्था। कृपया मलाई पूर्वानुमान आपूर्ति र मागको गैर-मूल्य कारकको उदाहरण दिन मद्दत गर्नुहोस् आपूर्ति र मागको मूल्य कारकहरू होइन - यी जटिल परिस्थितिहरूमा तत्काल सेवाहरू हुन सक्छन् (दान, मानवीय सहायता), आदि।
एक bitcoin मा कितने satoshes?
एक बिटकइनमा कति सतोशीहरू छन्? स्थिर नल १००० देखि 1000००० सतोशी हरेक १० मिनेटमा https://satoshinow.com/?ref=3000 सतोशी र अन्य क्रिप्टो मुद्राको लागि उत्तम कमाई, ठूलो संख्यामा नल https://yobit.net/?bonus=EhArY वास्तविक नल ...
मद्दत, कृपया, केहि तरिकाहरु मा उदाहरणहरु लाई उठाने को लागी, जो आर्थिक सिद्धान्त मा तरीहरु मा प्रयोग को भित्र मा प्रयोग गरिन्छ
कृपया मलाई राई-टू राईको केही विधिहरूको उदाहरण फेला पार्न मद्दत गर्नुहोस्। यो विश्लेषणको साथ संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ, अर्थात्, यसको कम्पोनेन्ट अंशहरूमा अध्ययन अन्तर्गत वस्तुको प्राथमिक मानसिक विकृति, ...
मोनोप्सो के हो?
मोनोप्सोनी भनेको के हो? मोनपोसोनी बजारको एक प्रकार हो जहाँ एक उत्पाद, सेवा वा संसाधन कार्यहरूको केवल एक खरीददार हो। अधिक सामान्यतया, फर्म बजारमा एकाधिकारवादी हुन्छ जहाँ अवस्था, जहाँ ...
राज्य बजेटको राजस्व र व्ययहरूको लेख सूचीबद्ध गर्नुहोस्।
राज्यको बजेटको आय र व्ययका चीजहरूको सूची बनाउनुहोस्। हामी एउटा विश्वविद्यालयमा गयौं, - म मेमोरीबाट लेख्दै छु - रूसी संघ १ को बजेट कोडको धारा with with अनुसार संघीय बजेटको कर राजस्व निम्नमा समावेश छ: - संघीय ...
एक माइक्रो-मियाडिया उद्यम के हो?
एक उद्यम माइक्रोस्फर के हो? उद्यमको विश्व वातावरण आन्तरिक वा तत्काल सर्तहरू, कारकहरू र यसको गतिविधिहरू निर्धारण गर्ने उद्यमको क्षमताहरू हुन्। MP का मुख्य कारकहरू हुन् - उद्यमको संगठनात्मक संरचना; आपूर्तिकर्ता बिचौलिया; ग्राहक प्रतिस्पर्धी;
पैसा आपूर्ति र मौद्रिक समुह। फिशरको सूत्र
पैसा आपूर्ति र मौद्रिक समग्रहरू। फिशरको सुत्र एक तर्फ संचलनमा पैसा रकम र उनीहरूको प्रचलनको गति बीचको सन्तुलनको वर्णन गर्ने समीकरण, र मूल्य स्तर र लेनदेनको मात्रा - ...
कसले विदेशी मुद्रामा कमाउँछ? ? के यो वास्तविक छ?
विदेशी मुद्रामा पैसा कसले कमाउँछ? ? यो वास्तविक हो ?? यो वास्तविक हो, जबकि त्यहाँ उत्तम ईन्टरनेट व्यवसाय विकल्पहरू छन्। लेख्नुहोस्। भर्चुअल - प्रशिक्षण खाताहरूमा - तपाइँ तपाइँको मोनिटरको स्क्रिनमा तपाइँको देब्रे हिलको साथ चित्रित हुनुहुनेछ - ...
तेल र ग्याँस भण्डार र उत्पादनमा विश्वको रूसको स्थान के हो?
तेल र ग्यास भण्डार र उत्पादनको सन्दर्भमा रूसले विश्वमा कुन स्थान ओगटेको छ? रसियन आधिकारिक स्रोतका अनुसार रसियाले विश्वको तेल भण्डारको १०% ओगटेको छ, जुन विश्वमै दोस्रो स्थानमा छ।
उद्घाटन के हो?
उद्घाटन भनेको के हो? राज्य प्रमुखको उद्घाटन समारोह। राजशाही शासनको अधीनमा यसको एनालग राज्याभिषेक हो। उद्घाटन भनेको राज्यको प्रतीकको एक किसिमको प्रतीक हो, जुन सर्वोच्च सार्वजनिक कार्यालयको महत्त्व र जिम्मेवारीलाई जोड दिन डिजाइन गरिएको छ।
मलाई लेख्नुहोस् र व्याख्या गर्नुहोस् मूल्य मूल्य सूचकांक र जीडीपी खारेज गर्ने गणनाको लागि सूत्र। विस्तारित फारममा राम्रो
कृपया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र जीडीपी डिफ्लेटर गणना गर्नको लागि मलाई सूत्र लेख्नुहोस् र बुझाउनुहोस्। विस्तारित फाराममा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकले सामान र सेवाहरूको "टोकरी" को औसत मूल्य स्तरमा परिवर्तन देखाउँदछ, सामान्यतया खपत ...
कोक कोइल के छ र यो के साथ छ?
कोक कोल भनेको के हो र यो संग के हो? कोइला उर्जाको साधनसँग सम्बन्धित छ, र सबै चीजहरू जुन ऊर्जा हो त्यसले प्रत्येक देशको कारोबारमा योगदान पुर्‍याउँछ। यो आयात हो वा निर्यात .. कोक - ...
अन्तर्राष्ट्रियकरण र ट्राफिकेशनलिसाइजेशन, के फरक छ?
अन्तर्राष्ट्रियकरण र ट्रान्सनेशनलाइजेशन के फरक छ? अन्तर्राष्ट्रियकरण र ट्रान्सनेशनलाइजेसन विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति हुन्। "अन्तर्राष्ट्रियकरण" शब्दका विभिन्न परिभाषाहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको अन्तराष्ट्रीय कार्यहरुमा सदैव गहिरो संलग्नताको प्रक्रिया हो।
मौद्रिक समुन्द्रमा के हो M1, M2, M3
मौद्रिक कुल M1, M2, M3 के हुन्। उपलब्ध डाटाबाट मौद्रिक समुह M1, M2, M3 फारम गर्नुहोस्। बैंक current०० एकाइहरूमा चालू खाताहरूमा जम्मा १२० एकाइ जाँच गर्दछ धातु पैसा १०० एकाइहरू सानो ...
49 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,256 प्रश्नहरू।